Ny antony manosika ho amin'ny fiainana tsara sy salama kokoa (mampivelatra ny tsenan'ny vehivavy)
Ny shapewear dia manome seho fanaingoana eo noho eo
Efa ninono tamin'ny kibonao ve ianao taloha ary tsy maintsy mitazona azy? Eny, ny formewear dia afaka manome izany fihenan-tsasatra tampoka izany nefa tsy mila manahirana amin'ny minono amin'ny vavoninao. Ny antony dia ny fanamboarana loko amin'ny endrika tena izy dia mitaky ny vokatry ny fifosana amin'ny alàlan'ny fanodinana ny tavy, ny kibonao ary ny fitaizanao fitiavana, ary tsy tokony hitadidy ny tsy maintsy mahatadidy izy ireo raha tsy mitsahatra.
Tanjona fanarenana maharitra maharitra
Na dia manana tanjona lavitra aza ianao toy ny fahazoana lanjany na bika aman'endrika endrika dia afaka manome anao voka-bina mihena.
Ny sasany Shapewear dia manome fampiononana feno mandritra ny andro manontolo nefa ny sasany kosa dia manohana mafy ary tsara ny mitafy mandritra ny ora vitsivitsy amin'ny fotoana manokana toy ny fampakaram-bady, fety, hetsika lehibe, sns…
Satria afaka manampy anao izy ireo hifanaraka tsara amin'ny akanjo mety na zipo lava na zipo. Na inona na inona karazana endrika endrika misy vatanao afaka manampy amin'ny fehin-kibo voafaritra kokoa.
Manome fahatokisana bebe kokoa ny Shapewear
Ny fitomboan'ny fahatokisana dia mety ho iray amin'ireo tombontsoa lehibe sy lehibe indrindra omen'ny zavaboary. Efa mba naheno ve ianao ny fepetra momba ny fahatokisan'ny mpanjifa? Ny fahatokisan-tena, fahatokisan-tena? Misy antony ny fandrefesana ny fahatokisana. Ohatra, raha ny fahatokisan'ny mpanjifa dia lanin'ny olona dia mihena ny vola hividianana mihoatra kokoa
Raha mihena ny fahatokisan-tena ananantsika dia mijanona ho mijanona bebe kokoa, mihena kely ary miafara amin'ny fiainantsika ara-tsosialy. Mety hitarika ho amin'ny fanazaran-tena ara-batana kokoa, ny fihinanana bebe kokoa, tsy ivoahana ary mety hitarika hakiviana.
Ny zavatra tsotra tahaka ny fametahana endrika dia afaka manamafy ny fahatokisanao tena ary hanome anao ny sisiny izay ilainao hahatsapa tena tsara indrindra. Rehefa mahatsapa tsara ny tenanao ianao dia mitarika hetsika kely izay miafara amin'ny fahatsapana ho tsara kokoa aza. Mahatsiaro sambatra kokoa ianao, manomboka mihinana tsara kokoa, manao fanatanjahan-tena bebe kokoa, mivoatra bebe kokoa, ary manovo angovo tsara izay manintona.
Haingo tsara kokoa
Ny fitomboan'ny posture dia toa tombony tsy ampoizina kokoa amin'ny fanamboarana endrika. Nankasitraka ity tombontsoa ity ny mpanjifanay ary tena gaga be izahay nahita an'io. Tena marina izany indrindra indrindra rehefa manao «train train». Ny fanamboarana ny valahany sy ny fanerena omena azy dia mahatonga azy hijanona eo amin'ny lamosinao hijanona ho henjana kokoa.
Izany dia manampy anao na inona na inona mipetraka, mijoro, na mandeha mandritra ny fotoana maharitra. Tsara izany raha manana asa izay mitaky anao hipetraka amin'ny latabatra tontolo andro ianao satria ny ankamaroan'ny vehivavy dia mirona mandehandeha mety hiteraka olana any aoriana.
Ny fitomboan'ny posture dia tsara ho an'ny lamosinao ary mety hisakana ny olana amin'ny ho avy. Ny tombony azo avy amin'ny posture dia manome fifandraisana tsy miteny. Tsotra fotsiny, amin'ny alàlan'ny fandehanana fotsiny ianao dia mijery tsy matoky tena kokoa ary afaka mandefa hafatra tsy misy vava mahery amin'ny olon-drehetra ao anatin'izany ny tenanao. Amin'ny alàlan'ny fijoroana somary avo kokoa noho ny mahazatra.
Afaka manampy amin'ny menaka fadimbolana ny mpivarotra
Voaporofo fa ny shapewear dia manampy amin'ny fanamaivanana ny fanaintainan'ny sakamalaho. Ny tsy fanahiana amin'ny fahatsapana fanaintainana rehefa miasa na mandritra ny diany dia miala aina be.
Rehefa mitafy bika, mpiofana amin'ny valahany, na korsets, ny framing dia mametraka ny tsindry amin'ny midsection ka ao anatin'izany ireo peritoneum taova izay manampy amin'ny fanaovana vohoka. Ny tsindry amin'ity tosidra ity dia mampihena ny fanaintainana any amin'ny faritra midsection.
Ny antony manosika hanana fiainana tsara sy salama kokoa
Andao atrehana azy ny sakana goavana amin'ny fahaverezan'ny lanjany, ny fanatanjahan-tena, ny fandehanana any amin'ny toerana fanaovana gym. Ary na dia aorian'ny fanombohantsika aza dia miatrika fanamby amin'ny fitazonana hatrany ny fotoana ary hijanona ho tsy miovaova.
Marina indrindra izany raha manana asa ianao, ankizy, na misy mifandray. Ahoana no hamporisihanao ny tenanao hikaroka ny fotoana itadiavanao ny vatana izay tadiavinao rehefa reraka, tsy manana fotoana ianao, be atao loatra, ary manana zavatra hafa ao an-tsainao?
Sarotra ny manomboka manao fanovana, indrindra fa ny lehibe iray toy ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena. Fa ny dia mankany amin'ny lalana arivo dia manomboka amin'ny dingana iray. Ary eo no mahatonga ny fanamboarana shapewear dia mety hitondra fiovana lehibe. Betsaka ny olona manana fijoroana ho vavolombelona mitovy fa rehefa nanomboka tsy nanao fiovana amin'ny fiainana izy ireo mandra-pahitany ny endrik'izy ireo ho azy ireo, ary indray mandeha nahita ny endriny, ny fimenomenon'izy ireo ary afaka maka sary an-tsaina ny endrik'izy ireo. Nanome azy ireo antony hanosika azy ireo izy ireo.
Nanomboka nifoha izy ireo aloha handeha ho any amin'ny gym, alohan'ny niasa, nahita angovo handeha amin'ny asa. Ny sasany dia niditra tao amin'ny fandaharana fiasana an-trano ary nampiditra an'io ho amin'ny fiainany. Nanomboka nanao sakafo mialoha izy ireo ary nanova ny sakafony. Nanomboka nanam-potoana ho an'ny tenany izy ireo satria be ny vehivavy manadino mahita fotoana ho an'ny tenany satria variana manao zavatra ho an'ny hafa izy ireo.
Saingy manomboka amin'ny zavatra kely fotsiny izany rehetra izany ary ny zavatra kely kely dia mitondra fiovana hafa amin'ny fiainanao, avy eo dia tsapanao fa ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia ampahany amin'ny fiainanao ary lasa zatra.